सात विगाह जमिनमा बोटानिकल गार्डेन निर्माण हुँदै – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / सात विगाह जमिनमा बोटानिकल गार्डेन निर्माण हुँदै
सात विगाह जमिनमा बोटानिकल गार्डेन निर्माण हुँदै
दाङ,१४ बैशाख । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ को हापुर बिजौरीमा बोटानिकल गार्डेन निर्माण गरिने भएको छ । हापुरको करिव सात विगाह जमिनलाई समेट्ने गरि बोटानिकल गार्डेन निर्माण गरिन थालेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र बुढामगरले बताए ।
१४ बैशाख २०७६, शनिबार ०६:२५
Previous: शान्तिका क्रियाकलाप आवश्यक
Next: सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘ठाउँको ठाउँ सुधार कार्यक्रम’ शुरु